Sida loo diyaariyo bataatiga eggplant iyo khudaarta kale - Hagaajinta caafimaadkaaga - TELESHI RELAY
ACCUEIL » rasiidhada »Sida loo diyaariyo bataatada ukunta iyo khudaarta kale - Hagaajinta caafimaadkaaga
Sida loo diyaariyo bataatada ukunta iyo khudaarta kale - Hagaajinta caafimaadkaaga
Haddii aad ka mid tahay kuwa u baahan cunto fudud laakiin aad rabto in aad cunto caafimaad leh, maanta waxaad ogaan doontaa sida loo diyaariyo chips eggplant iyo khudaarta kale. Sidoo kale waxay noqon doonaan kuwo aad u fiican haddii aad la socotid suugaanta vinkaigrette ama digirta guriga!
ka chips waa marxalad Maraykan ah dejinta dbaradhada ganaaxamaskaxda gooyaa iyo baradho heerkulka sare. Caadi ahaan waxay leeyihiin qaab sawir ah, maxaa yeelay baradho waa la goynayaa.
Sidoo kale fiiri maqaalkan: Baradhada: faa'iidooyinka iyo khatarta
this cuntada waa mid aad u caan ah waddamada reer galbeedka. Waxaad runtii ku iibsan kartaa dukaanka ama dukaanka kasta. Laakiin haddii aad raadineyso wax caafimaad ah, raac talooyinkeena ku saabsan samaynta boogaha ukunta iyo khudaarta kale.
LEggplant waa mid ka mid ah ugu inta badan used en hudheellada si aad taas u sameyso. Waxa kale oo ku jira guryaha nafaqada ee bixiya faa'iidooyin badan jirka. Indeed, eggplant:
Cudurka dabayshane iyo antiviral sababtoo ah joogitaanka flavonoids ee qaybaha ay
Waxay ka kooban tahay fiitamiin E, Folic Acid iyo Fiber diirran. Taasi waa sababta loogu talagalay daryeelka maqaarka, xilliga uurka iyo miisaan lumis
Dhibaatooyinka beerka ee dagaalka sababtoo ah waxay kicisaa wax soo saarka
Ela tixgeliyey, sababtoo ah maaddada biyaha sare, sida khudradda durayo. Waa kufiican tahay inaad ka saarto sunarka sunta
Haddii aad boogahaaga u diyaarisid khudaar kale, sida qajaar, dabacasaha, dabacasaha ama bocorka, waxaad heli doontaa cunto fudud oo aad u caafimaad qabta si aad u dardargeliso cunnooyinkaaga yar.
Sida loo diyaariyo khudradda ukunta iyo khudaarta kale
1. Chips eggplant
Waxaad raaci kartaa chips oo leh suugo vinkaigrette ama suugo toon ah, suugo tartare iyo xataa suugo yaanyo. Waxaad sidoo kale isku diyaarin kartaa naftaada oo aad heli kartaa isku-dhafka ugu fiican.
2 eggplant ee dhexdhexaad ah (500 g)
Koobka 1 ee burka (120 g)
2 miisaan cusbo ah (30 g)
1 miisaanka budada budada ah (15 g)
1 / 2 koob oo saliid saytuun ah (125 ml)
Koobka 1 ee biyaha carbonated (250 ml)
Waraaqo nadiif ah
Marka hore, si fiican u dhaq geedka ukunta ka dib iyaga u googooyaa qaybo khafiif ah jihada dhererka.
Ka dibna cusbo ku shub weelka yar yar.
Ku qallaji qaybaha qoyan ee ku jira biyaha kulul ee 20, iyaga daadi oo ku rid saxan.
Ka dibna saliidda saliida ah ku dhex shid heer kulka dhexdhexaad ah.
Gado qayb kasta oo eggplant ah oo bur ah oo isku shiil ilaa bunka dahabka ah.
Ugu dambeyntii, marka qandhooyinka oo dhan diyaar u noqdaan, ku dhaji tuwaal waraaqo ah, u adeega saxan iyo isku dar milixda iyo burinta.
2. Baked qajaar la qallajiyey
Cucumber waa khudradda cagaaran ee ku jirta antioxidants, fiitamiinada A, B, C iyo E, fiyuusta cuntada iyo macdanta muhiimka ah sida potassium, magnesium iyo birta.
Waxa kale oo ay ku fiican tahay daryeelka maqaarka, si loo xoojiyo unugyada isku xiran ee jidhka iyo hagaajinta nidaamka wadnaha.
Sidoo kale fiiri maqaalkan: Faa'iidooyinka qajaarka
Qajaarka 2 (400 g)
1 miisaanka la jarjarey (15 g)
Qaababka 3 ee geedo khafiif ah (45 ml)
1 spoon oo ah suugo soy ah (15 ml)
Si aad u bilawdid, u dhaqdid oo u gooyaa qajaarka dhererka oo ku dhaji saxan.
Ka dibna isku dhex dar baaquli dhexdhexaad ah oo khudradda cider leh saliid saytuun, suugo soy ah, milix iyo dhir.
Ku qoy boogaha qajaarka ee isku dar ah ka dibna meel dhigon saxan tegaya foornada oo leh waxoogaa yar aluminium aluminium .
Ugu dambeyntii, ku kari 180 ºC for 10 ama 15, ilaa dahab ah. U adeegso oo ku raaxee.
3. Chips leh bocorka
La bocorka waxaa ku jira fiitamiin A iyo Cmacdanta muhiimka ah sida potassium, kalsiyum iyo magnesium, folic acid iyo acids amino. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad isticmaasho haddii ay dhacdo cayil, caloosha, uurka iyo inaad ka taxadarto maqaarkaaga.
Koobabka 2 ee bocorka (240 g)
Xirmooyinka 1 ee paprika (5 g)
Xirmooyinka 1 ee basbaas (5 g)
Koobka 1 / 2 ee burka (60 g)
Xirmooyinka 1 ee cusbo (5 g)
1 / 2 koob oo saliid ah gabbaldayaha (125 ml)
1 waxay jarjaraysaa khudaarta cagaaran
Marka hore, googooyi baaluq oo jarjar si aad u siiso qaabka jajabka.
Kadibna isku dar uunsi iyo cusbo ku jira baaquli dhexdhexaad ah oo ku rid bakhaarka bocorka.
Daadi burka sarreenka saxanka kuna riix kareemka.
Kadibna fiilo kululeeyaha leh saliid gabbaldayaha kadib iyaga shiil chips ilaa ay dahab yihiin.
Ugu dambeyntii, daadi, ha u diyaargaroobaan oo ha u adeegaan. Hadda waxaad taqaanaa sida loo sameeyo bataatada ukunta iyo khudaarta kale.
Waxaan kugu dhiirigelineynaa inaad diyaarisid bacaha eggplant iyo khudaarta kale sababtoo ah dhadhanka ayaa ku farxi doona. Ma waxaad u maleyneysaa inaad cuni lahayd caano caafimaad leh hadda?
Sidee loo sameeyaa shiil aad u qallalan?
Sidee loo sameeyaa shiil aad u qallalan? Talooyin iyo talooyin dhawr ah oo kaa caawin doona inaad mar kasta ku guulaysato dhawr tallaabo oo fudud. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/comment-preparer-des-chips-daubergine-et-dautres-legumes/